के गच्छादार ‘अवैधानिक’ उपसभापति हुन् ? - Dainik Nepal
के गच्छादार ‘अवैधानिक’ उपसभापति हुन् ?
दैनिक नेपाल २०७५ कार्तिक २१ गते १२:५७
काठमाडौं, २१ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतरका तीन गुटले बिजयकुमार गच्छादारको उपसभापति मनोनयनलाई ‘अवैधानिक’ भनेका छन् ।
केही युवाले पनि केन्द्रीय समितिबाट गच्छादारलाई गरिएको नियुक्तिको विरोध गरेका छन् । गच्छादारलाई फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउनुअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति बनाउने सर्त मानेका थिए ।
नेता विमलेन्द्र निधिलाई पहिलो चरणमा उपसभापति नियुक्त गरेका बेला गच्छादार रुष्ट थिए । तर, देउवाले उक्त पदमा मधेस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छन् । यसलाई अन्यले भने विधानविपरित पनि भनेका छन् ।
जे विधानसम्मत हुन्छ त्यहि नै वैधानिक हुन्छ । तर, नयाँ विधान पास गरे पनि कांग्रेसले उपसभापतिको परिकल्पना जसरी गरेको त्यहिअनुसारको नियुक्तिमा एकरुपता हुनुपर्छ । तर, सभापति देउवाले अन्य नेतालाई विभेदका आधारमा गच्छादारलाई मात्र उपसभापति मनोनित गरे । जसमा सबैजसो सिनियर नेताहरू रुष्ट छन् ।
कोइराला परिवारकी एकजना सदस्य सुजाता कोइरालाले त देउवाको कार्यशैलीका कारण यो नै उनको अन्तिम नेतृत्वकाल हुने चेतावनी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सभापतिज्यूले उपसभापति मनोनित गर्नुभयो । तर, हामीसँग सल्लाह लिनुभएन । सल्लाह लिएको भए राम्रो हुनेथियो ।’
अहिले कांग्रेस चार खेमामा बाँडिएको छ । कोइराला परिवारको छुट्टै गुटसहित नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि फरक गुट छ । अन्यसँग सल्लाह नै नगरी सभापति देउवाले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरेको नेताहरूको आरोप छ । कोइराला अघि थप्छिन्,‘ ‘सभापति ज्यू, कुनै एक गुटको जस्तो सभापति बन्नुभएन । अब सिँगो पार्टीको सभापति बन्नुपथ्र्यो ।’
त्यसो त पौडेल समूह देउवासँग उपसभापति मनोनयन प्रक्रियामा विवादमै उत्रिएको थियो । सल्लाह नगरेको भनेर मात्र होइन, उपसभापति मनोनित गर्ने हो भने कति जनालाई कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने आधार र व्यक्ति छनौट नगरेकोप्रति पनि पौडेल समूह रुष्ट छ ।